China Best Price for SG (B) 10 Series Distribution Transformers Wholesale-Shengte emepụta na suppliers |Shengte
Ọnụ kacha mma maka SG(B) 10 Series Distribution Transformers N'ogbe-Shengte
Na mgbakwunye na uru niile nke ụdị akọrọ akọrọ na China, transformer nwekwara àgwà ndị a:
Mkpuchi: Ihe mkpuchi mkpuchi bụ H (180 C) na nrụpụta imewe buru ibu.
Safety: SG (B) 10 usoro akọrọ ụdị transformer e mere dị ka H-klas mkpuchi ọkwa, mgbe isi mkpuchi ihe bụ DuPont NOMEX akwụkwọ nke United States na C-klas (okpom-iguzogide nwere ike iru 220 C).Ihe ngbanwe ahụ agaghị abụ ihe na-egbochi ire ọkụ, ọkụ na-ere ọkụ ma ọ gaghị agbawa ka ọ hapụ gas na-egbu egbu.
Enyi na gburugburu ebe obibi: Transformer core bụ oyi akwa silicon steel mpempe akwụkwọ nwere nnukwu magnetik conductivity na elu mma.Site na imewe Dell pụrụ iche, mkpọtụ ọrụ dị n'okpuru ọkọlọtọ mba.Enwere ike nwetaghachi ya mgbe ndụ ọrụ zuru oke ma ghara imetọ gburugburu ebe obibi.
Ihe mkpuchi mmiri: N'ihi nnukwu mkpuchi mkpuchi NOMEX, ọ nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma na gburugburu iru mmiri.Mgbe a na-emeso eriri igwe ahụ n'ozuzu ya, ọkwa akara nke onye nduzi na ike arụ ọrụ nke eriri igwe na-ewusi ike ọzọ site n'itinye agba na-ekpo ọkụ ruo ọtụtụ oge.N'otu oge ahụ, a na-emeziwanye antisepsis na mmiri na-eguzogide nke transformer.
Ogologo oge: Klas H mkpuchi nwere ike iguzogide okpomọkụ na-arụ ọrụ nke 180 C. Ọ nwere ezigbo nguzogide okpomọkụ, ike nrụpụta dị elu, ọnọdụ ikpo ọkụ ọkụ dị mma, ikike ibufe ike, ogologo ndụ okpomọkụ, ọ dịghị emetụta mgbasawanye ọkụ na nkwekọrịta, ịdị mma siri ike na ịdị nro. mgbe ọ bụla cracking.
Economy: N'ihi nnukwu nguzogide okpomọkụ nke sistemu mkpuchi, enwere ike ibelata oghere dị jụụ nke transformer.E jiri ya tụnyere ihe ntụgharị nwere otu ọkwa mkpuchi ahụ, enwere ike ịmebe ihe owuwu ahụ ka ọ bụrụ kọmpat na ịdị arọ nwere ike belata ntakịrị.E jiri ya tụnyere ụdị 09 nke ngbanwe, ọnụọgụ enweghị ibu nke ụdị 10 nke ihe ntụgharị na-ebelata site na 15% na ọnụ ahịa ọrụ na-ebelata nke ukwuu.
Nka na ụzụ paramita nke SC (B) 10 akọrọ ụdị mgbanwe
Enyere ikike (KVA) mfu Enweghị ibu ugbu a (%) Ihe mgbochi sekit dị mkpụmkpụ (%) Ọkwa ụda DB (A) Akụkụ ntụaka profaịlụ (mm) Ibu ahụ (kg) Nledo (mm)
Enweghị ibu SG10 Ibu ibu 145 C L x W x H na-enweghị shei L x W x H nwere ikpe
Mbukota & ibuga
Nke gara aga: ngbanwe nke mmanụ
Osote: Onye na-eweta OEM maka 10KV Class S11 Series On-Load Voltage-Regulared Distribution Transformers-shengte
S11-M-800/10 Mmanụ emikpu n'ụzọ zuru ezu akara n'èzí ...
S11-M-630/10 mmanụ na-emikpu juputara akara elu-vo ...
S11-M-1000/10 ONAN ọla kọpa Aluminom ụdị atọ ...
S11-M-1250/10 Nkesa etinyere mmanụ na agba atọ...
S11-M-500/10 mmanụ ụdị atọ agba n'èzí distr ...
Onye na-ebu OEM maka 10KV Class S11 Series On-Load ...